Barlamaanka Oo Farmaajo U Sameeyay Muddo Kordhin – Great Banaadir
MUQDISHO – Kulan sida la rumeysan yahay aan helin tirada rasmiga ah ee ay ku furmaan Kulamda Golaha Shacabka, ayaa Maanta Muddada Xil Heyntiisa loogu dheereeyay Madaxweynaha Waqtigisii Sharciga Ahaa Dhamaaday ee Farmaajo.
Ajande ay soo diyaareen Fahad, Farmaajo, Rooble iyo Mursal, oo loo so dhiibay 57 Xildhibaan oo katirsan Golaha Shacabka ayaa la keenay Baarlamaanka, waxaana la laalay Heshiiskii 17-kii Sebteember 2020, lagu gaaray Muqdisho, iyadoo dib loo soo celiyay Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka.
Qodobka 4-aad ee baaqa uu maanta meel mariyay Golaha Shacabka, waxaa lagu sheegay in Goluhu qaatay, Xulashada Nuuca Diiwaan-galinta ‘Biometric’ si waafaqsan Warbixiintii Xaliimo Yarey, kahor jeedisay Baarlamaanka 27 Juun 2020.
Xukuumadda iyo Hay’adaha kale ee Dowladda ayaa lagu amray in ay Hirgalinta Doorashiiyinka uga danbeeyaan, Guddiga Madaxa-bannan ee Dooraashooyinka.
Qaraarkaan Muddada lagu kordhinayay ayaa helay Ansixinta, Gacan Tag dhan 149 Xildhibaan oo katirsan Aqalka Hoose ee Baarlamaanka, waxaa diiday Saddex Xildhibaan halka uu hal qura ka aamusay.
Qaar kamid ah Xildhibaannada Golaha ayaa Cod-baahiyaha ka sheegay in Xarunta ay ku dhex jireen Ciidamo Dhar Cad ah, oo ka baxsan Ilaalada Xarunta Hoolka Shirarka ee Baarlamaanka.
Xaaladda Siyaasadeed ee Dalka ayaa Maanta yeelatay waji kale, Xildhibaannada Golaha Shacabka, ayaana meel mariyay baaq lagu laalay Heshiiskii Doorashada ee Sebteember 2020, lagu gaaray Caasimadda Soomaaliya.
Qaraarkan, Maanta la ansixiay, oo ka yimid Madaxtoyada ayaa Ha’adaha Muddadu Ka Dhamaatay ee Sharci Dajinta iyo Fulinta u ogolaanaya in ay sii shaqeeyaan Muddo Labo Sano ah, taas oo la micno ah in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, uu Golaha Shacabku u ogolaaday inuu ku sii fadhiyo Kursiga.
Madaxweymaha Waqtigu Ka Dhamaaday Farmaajo, oo dhowr jeer si ula kac uga istaagay Shirar looga dooday xal u helidda Hannaanka Doorashooyinka Dalka ayaa Muddo Kordhintaan ka dhigan doona Garab iyo Gaashaan, si uu u Diido Wada-hadallo kale oo dhawaan uu la yeesho Madaxda kale ee Soomaaliya.
Waxaa fashilmi kara Wada-hadallada ay Madaxweynayaasha Maamulladu u joogaan Muqdisho iyo Shirarka Wakiillada Beesha Caalamku soo qaban qaabiyeen, waxaana suura gal ah in qeyb kamid ah Madaxda Maamulladu ku laabtaan Degaannada ay yimaadeen.
Beesha Caalamka oo hore u sheegtay in aysan Aqbali Doonin, Muddo Kordhin, Doorasho cid gooni ah u xiran iyo kuwo Is-barbar socda ayaa la rajeynayaa in ay si adag uga hadlaan Muddo Kororsiga ay Madaxtooyadu u martay Baarlamaanka.